कोरोनाबाट कु,वेतमा पहिलो पटक ने,पालीको ज्या,न ग,यो -
कोरोनाबाट कु,वेतमा पहिलो पटक ने,पालीको ज्या,न ग,यो
कुवेत / कुवेतमा कोरोना भा`इरस सङ्क्र´मणको का`रण एक नेपालीको मृ`त्यु भएको छ। उनी कुवेतमा कोरोनाका का`रण मृ´त्यु हुने पहिलो नेपाली हुन् । ललितपुर किर्तिपुर पाँगाका ३८ बर्षिय बिकास महर्जन केही दिनदेखी कुवेतको फर्वानिया हस्पिटलमा उपचा’ररत थिए र उप’चारकै क्र`ममको उनको मृ´त्यु भएको जनाइएको छ ।
उनी बिगत १८ बर्षदेखि कुवेतमा कार्यरत थिए । मृत`कका परीवारलाई जानकारी गराई उनको कुवेतमै दहसं`स्कार गरिने कुवेतस्थित नेपाली दूताबास स्रोतले जमाएको छ । कुवेतमा शुक्रवार मात्र थप ९५५ जना नया कोरोना भा`ईरस सं`क्रमित थपिएको छ । योसॅगै कोरो’ना सं`क्र’मितको संख्या १९,५६४ जना पुगेको छ । यसमा ८४ जना नेपाली पनि छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा को’रोना भा`इरसका कारण ९ जनाको ज्यान गएको छ । यससॅगै कुवेतमा कोरोनाका कारण मृ´त्यु हुनेको संख्या १३८ जना पुगेको छ ।
को’रोना भा’इरसबाट विश्वभर १ सय २८ नेपालीको मृ’त्यु, कुन देशमा कति ?
मनिषाको देशभक्ति अभिव्यक्ति: एमसीसीलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ, टनकपुर सन्धि सम्झिँदैछु…
को’रोना प्रभावित महाराष्ट्र र दिल्लीबाट नेपालीहरु धमाधम घर फर्कँदै !
भारतीय अ’तिक्रम’णको वि’रोधमा पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरुद्वारा क’डा…
खो’क़्रो राष्ट्रवाद मु’र्दाबाद भन्दै अमेरिकाबाट जल शाहको स्टाटस मार्फत…
कालापानी लिपुलेक नेपालमा पर्छ, भारतको होइन भन्दै यी साहसी नेपाली युवक दिल्लीगेटमा,…